U-V Mash uzofihlwa kusasa e-Pretoria - Ilanga News
Home Izindaba U-V Mash uzofihlwa kusasa e-Pretoria
U-V Mash uzofihlwa kusasa e-Pretoria
UBHUBHANE lwe-covid 19 luvimbe obekuzokuba wumngcwabo omkhulu eNingizimu Afrika njengoba uVinolia “V Mash” Mashego (osesithombeni)ebengumuntu wabantu futhi ethandwa kakhulu kuleli.
U-V Mash udlule emhlabeni ngeSonto kusihlwa elele kwakhe eMamelodi, ePretoria.
Lo saziwayo uzakhele igama eminyakeni yama-90’s lapho ebengumlingisi emdlalweni iGenerations, kanti ubeyintandokazi ethula uhlelo lwabantu abasha, iJam Alley kwi-SABC1.
Lolu hlelo, abelushayela noNimrod Nkosi, belungolunye obelubukelwa kakhulu kanti uV Mash uzakhele igama ngamatemu akhe ahlukene okubalwa nelithi “Iyoh Bangani Iyoh!”.
Baningi abaculi nosaziwayo abaqale ukugqama kulolu hlelo njengoba bebemema osaziwayo nabaculi ukuzoba ngamajaji kulona, baphinde banandise khona.
Nakuba ebeyintandokazi ngaleso sikhathi, kodwa izinto ziqale ukumbhedela ngesikhathi ekhonjwa indlela kwiJam Alley, okumphendule umgod’ onganukwanja kubakhiqizi bezinhlelo nemidlalo kamabonakude.
Kumthathe iminyaka ngaphambi kokuba avele kwelinye lamaphephabhuku ekhala ngokuba nesigcwagcwa sokungawutholi umsebenzi.
Ngemuva kwalokho uqalile ukuthola umsebenzi njengoba ebonakale kancane kwiSibaya ngaphambi kokuthola umsebenzi emdlalweni weSABC 2, iGiyani Land of Blood.
UCandy Tsa MaNdebele Mokwena, ongumculi futhi ongumlingisi, uthe uqale ukwazana noV Mash eminyakeni yama-90’s kodwa usondelane naye kakhulu sebelingisa ndawonye kulo mdlalo.
Uthi kulo mdlalo bebelingisa ukuba yizelamani ezingaboni ngaso linye ngaso sonke isikhathi, kodwa uma sebeqedile ukuqopha bebezwana kakhulu.
“Kuningi ebesikukhuluma okuthinta lo mkhakha nezinhlelo esinazo ngekusasa. Ngikhumbula ingxoxo yethu yokugcina, ibimayelana nohlelo abelwenza kwiMoja Love (Bheka Sik’bambile) ne-albhamu yami entsha ethi, Still Here abeyilangazelele ngendlela eyisimanga,” kusho uCandy.
UBokani Moyo, oyisikhulu seMoja Love, uthe ukushona kukaV Mash kubazume kakhulu njengoba bebesazimisele ukuqhubeka nokusebenza naye kuya phambili.
Uveze ukuthi lo saziwayo uzofihlwa kusasa ngoLwesihlanu emathuneni aseHatherley, ePretoria.
Isitatimende somndeni sithi ngeke ibekhona inkonzo enkulu yomngcwabo ukuhlonipha imiyalelo kahulumeni yokugonqa izinsuku eziwu-21 ukunqanda ukubhebhetheka kwe-covid 19.
Ushiye emhlabeni indodana yakhe, u-Oratile, oneminyaka ewu-20 ubudala.
Previous articlebazifake obishini abaculi abavakashelane kugonqiwe
Next articleithathe elinye igxathu eyokungaphephi konesi